Araho ireo mpanamboatra kiraro sy mpamatsy - China Track shoes Factory
Araka ny karazana mpampiantrano sy ny toe-piainan'ny mpiasa, ny lavaka famoahana fotaka amin'ny kiraro dia natao mba hampihenana ny fahasimban'ny zavatra mafy ivelany ho an'ny làlana ary hanatsarana ny fanoloana ny kiraro.
Bonovo dia manome kiraro feno triple grouser excavator feno 300mm ka hatramin'ny 1200mm ho an'ny habe mahazatra sy tsy manara-penitra.
Araka ny karazany isan-karazany fampiantranoana sy ny toe-piainan'ny asa, ny lavaka famoahana fotaka amin'ny kiraro dia natao mba hampihenana ny fahasimban'ny zavatra mafy ivelany ho an'ny làlana ary hanatsarana ny fanoloana ny kiraro lalamby;
Bonovo dia manome kiraro feno triple grouser excavator feno 300mm ka hatramin'ny 1200mm ho an'ny habe mahazatra sy tsy manara-penitra. Izahay koa dia manolotra vondron-dàlana mivondrona miaraka amina rojo / familiana kiraro mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Azontsika atao ihany koa ny manao santionany miorina amin'ny filanao mba hitsapana ny vokatray.
Bonovo dia mamatsy kiraro trondro excavator triple feno 300mm ka hatramin'ny 1200mm ho an'ny habe mahazatra sy tsy manara-penitra.
Izahay koa dia manolotra vondron-dàlana mivondrona miaraka amina rojo / firafitry ny kiraro mihazona ny zavatra takinao.
Bonovo dia afaka manome anao isan-karazany ny sombin-tsarimihetsika ho an'ny ankamaroan'ny mpamongady marika sy milina fanday hafa.
Miaraka amin'ny mpiasa traikefa efa mihoatra ny folo taona milofo ho amin'ny fahalavorariana amin'ny dingana rehetra, Bonovo dia manome hatrany ny habetsaky ny faritra misy kitrotro mafy miaraka amin'ny fahombiazan'ny vidiny tsara indrindra manerantany.
Bonovo dia manome kiraro feno triple grouser excavator feno 300mm ka hatramin'ny 1200mm ho an'ny habe mahazatra sy tsy manara-penitra. Izahay koa dia manolotra vondron-dàlana mivondrona miaraka amina rojo / familiana kiraro mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Ho an'ny excavator, izahay dia manangona kiraro làlan-tokana tokana feno amin'ny sakan'ny fenitra rehetra hahatratra ny takiana rehetra. Ny kiraro mpihazakazaka rehetra dia manana baseplate adidy mavesatra mba hampitomboana ny androm-piainana.
Ny kiraro lalamby mitaky taonina lehibe dia mandray ny firafitry ny "double-nify" sy ny lalan-kely mifanila aminy, izay tsy manatsara ny fihazonana ny làlana fotsiny, fa misoroka ny famotsorana sy ny vaky nateraky ny fitrandrahana ny kiraro. nivadika ny masinina.
Amin'ny fampiasana fitsaboana hafanana manokana, ny fisaka amin'ny vokatra dia fehezin'ny làlana marindrano, ary ny hamafin'ny hazondamosina dia mitovy, miaraka amin'ny toetra mekanika tena tsara sy ny fanoherana tsara amin'ny fitafiana;
Ity no vokatray malaza amin'ny salety. Ny sehatr'asanay momba ny andiam-panamoriana ambanin'ny tany dia ny faritra fanampiny izay mifandray amin'ny tany ary ampiasaina amin'ny fihetsiky ny masinina.